माेदीकाे तिब्र दबाबमा ओली सरकारले गर्याे फेरी जनता रुवाउने घातक निर्णय, चौतर्फी बिरोध — Sanchar Kendra
माेदीकाे तिब्र दबाबमा ओली सरकारले गर्याे फेरी जनता रुवाउने घातक निर्णय, चौतर्फी बिरोध
काठमाडौं । ओली सरकारले फेरी एकचोटी जनता रवाउने निर्णय गरेको छ । भारतको चर्को दवावपछि सरकारले भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने पूर्ववत आफ्नै निर्णय परिवर्तन गरेको छ । भारतले चर्को दबाव दिएपछि सरकारले तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको हाे । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवले शुक्रबार बसेको संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा यसको जानकारी दिएका हुन्। भारतले चर्को दबाब दिएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदले सीमामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँच्ने निर्णय फिर्ता लिएको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री खनालले भारत र तेस्रो देशबाट आयात हुँदै आएको तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण सरकारले फिर्ता लिएको पुष्टि गरेका छन् । वाणिज्य मन्त्री मात्रिका यादवले ‘लाइन मिनिष्ट्री’सँग छलफलै नगरी एकलौटी विषादी परीक्षण निर्णय फिर्ता लिने विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगे’, शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कृषिमन्त्री खनालले भने, ‘उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।’
भारतको तीव्र दबाव –केही दिनअघि भारतीय दूतावासले आफ्नो देशमा उत्पदित तरकारी नेपालमा छिर्न नदिएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । दूतावासले लेखेको पत्रमा तरकारी आयात प्रक्रिया निर्वाध सुचारु गराउन आग्रह गरिएको थियो । नेपालले भारत र तेस्रो मुलुकबाट तरकारी, फलफूल आयात गरिरहेको छ। तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको पाइएएपछि सरकारले भन्सारमै चेकजाँच गरिरहेको थियो। नेपालले चेकजाँच गरेपछि सीमामै तरकारी कुहिने अवस्था आएपछि दूतावासले सरकारलाई दबाब दिएको थियो। दूतावासले पत्र लेखेर निर्वाध खाद्यान्‍न र तरकारी भित्रिन दिन भनेको थियो । दूतावासका अधिकारीहरुले सरकारलाई यसमा दबाब पनि दिइरहेका छन्। भारतीय दूतावाससँगै उत्तर प्रदेश र बिहारका लोकसभा र विधानसभाका सांसदहरु समेत तरकारीमा विषादी परीक्षण खुलाउने लविङमा जुटेका थिए। उनीहरुले भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारलाई यस विषयमा तीव्र दबाव दिएका थिए।
यस्तो थियो रोक्ने निर्णय –केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १० गते भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि असार २ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर भन्सारमा चेकजाँच थालिएको थियो । सरकारको निर्णायनुसार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने रेडबुलसहितका पेय पदार्थमा पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थमा प्रतिबन्धसँगै तरकारीमा विषादी पनि जाँच थालिएको थियो। सरकारले भारत र तेस्रो मुलुबाट आइरहेको तरकारी र फलफूल भन्सार बिन्दुमै क्‍वारेन्टाइन र विषादीको अवशेष परीक्षण गरिरहेको छ। सरकारले गरेको निर्णयानुसार सुनौली, वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज र काँकडभिट्टासहितका नाकाबाट आउने तरकारी र फलफूल परीक्षण भइरहेको थियो। परीक्षणका क्रममा विषादी नभएको कागजात नेपाली अधिकारीले दिएपछि मात्रै भारतीय तरकारी नेपाल छिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
किन भयो निर्णय फिर्ता –भारतको तीव्र दबावपछि नेपाल सरकारले विषादी परीक्षण फिर्ता लिएको छ । अब भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारीमा तत्काल विषादी परीक्षण हुनेछैन । ‘भारतीय दूतावास तथा बिहार युपीका सांसदहरुसमेत नेपाल सरकारको निर्णय फिर्ता गराउने दबावमा जुटेका थिए’, प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले भने, ‘विषादी परीक्षण गर्ने मेसिनसहितको पूर्वाधार भन्सारमा स्थापना नगरुनजेलका लागि फिर्ता लिने निर्णय भएको छ।’ स्रोतका अनुसार तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई लिएर भारतीय पक्ष रुष्ट भएको थियो । नेपालका सीमामा विषादी परीक्षणस्थल नभएकाले भारत र तेस्रो देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको नमूना संकलन गरेर काठमाडौंको कालीमाटीमा परीक्षा गरिन्थ्यो । त्यसो गर्दा तीनदेखि चार दिनसम्म समय लाग्थ्यो । यो अवधिमा भारत र अन्य मुलुकबाट आएको फलफूल र तरकारी कुहिने अवस्था भएको थियो । सरकारले सीमामा विषादी परीक्षणस्थल आगामी ६ महिनामा बनाइसक्ने गरी आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको हो।
मेरो रिसले भए पनि मास्क लगाइदिनुस्– प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको विरोध गर्नैका लागि कतिपयले मास्क लगाउन थालेको आरोप लागाएका छन् । पूर्व नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरुलाई नेकपामा भित्र्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विरोधका लागि नै केही मानिसले सम्झिएर मास्क लगाउन थालेको बताएका हुन् ।‘मास्क लगाउनुपर्छ भनेर केहीले सम्झेर मास्क लगाउन थालेका छन्, सरकारको विरोधका लागि। मेरो शुभकामना छ, मास्क लगाउने बानी गर्दा राम्रै हुन्छ। मेरो रिसले भए पनि मास्क लगाइदिनुस्’ ओलीले भने । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा अहिले मास्क लगाउने अवस्था नरहेको भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको अलोचना भइरहेको थियो ।
विपक्षीले आलोचना गर्नु स्वभाविक भएको ओलीको भनाइ थियो । चुनाव पनि जित्न नपाउनु र आलोचना पनि गर्न नपाउनु उपयुक्त नहुने ओलीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको आईफा अवार्डको विरोध भएकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । २० लाख पर्यटक भित्र्यान सरकारले योजना बनाएको भएपनि अनावश्यक हल्ला चलाइएको उनको दाबी थियो । थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल पाउने गरि निर्णय गरिएको भएपनि अर्बौ खर्र्च भनेर हल्ला गरिएको उनको भनाइ थियो । प्रधामन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओलीले नेकपा सबैलाई स्वागत गर्न तयार रहेको बताए । उनी भन्दा पहिला बोलेका प्रचण्डले डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेकपामा आउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसमा थप गर्दै ओलीले भट्टराई मात्र नभएर फोरम र अन्यत्र अलमलिएका नेतालाई पनि पार्टीमा आउन आह्वान गरे ।
त्यस्तै समाजवादी पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीमा आउन आग्रह गर्ने प्रचण्डलाई कडा जवाफ फर्काएका छन् । भट्टराईले दीपक मनाङेहरु भएको पार्टीमा आफ्नो आवश्यकता नहुने बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमा बोल्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा आउन बाबुरामलाई आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डको उक्त कुराको जवाफ दिँदै भट्टराईले मनाङे जस्ता बौद्धिक नेताहरु भएको ठाउँमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने कटाक्ष गरेका हुन्।
प्रचण्डले बाबुरामप्रति इङ्गित गर्दै उनीजस्ता बौद्धिक नेताहरु कम्युनिष्टहरुले सामाजिक न्यायका लागि बल गरेका बेला यहीँ लाग्नुपर्ने बताएका थिए। प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा आफ्ना पूर्वसहयोद्धा बाबुराम भट्टराईलाई पनि सम्झिँदै उनको बौद्धिकता अन्त काम नलाग्ने बताएपछि बाबुरामले जवाफ दिएका हुन्। ‘उहाँहरुले हामीलाई छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ बनाउँछु भनेर हिँड्नु भएको छ। बाबुरामजीको बौद्धिकताले अन्त गएर कहीँ सकारात्मक परिणति दिएको देखिँदैन’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नजोडिए बाबुरामको बौद्धिकताको अर्थ छैन ।’
तर त्यसको जवाफ दिँदै प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई बाबुरामले ‘कमाउनिष्ट’ पार्टीको संज्ञा नै दिए । ‘कमरेड दीपक मनांगे जस्ता ‘बौद्धिक’भएको ‘कमाउनिष्ट’पार्टीमा अरू बौद्धिकहरू पनि आवस्यक पर्छ र?’, बाबुरामले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमार्फत् आफ्नो धारणा राख्दै भनेका छन्। कम्युनिष्टमा नजोडिए बाबुरामको बौद्धिकताको के काम? प्रचण्डको चिन्ता : सोझ्याउँछु भन्दै विप्लव हिँडे, रोहित कसरी मान्लान्, वैद्यलाई कसरी बुझाउनु?
त्यसअघि शुक्रबारै गरेको अर्को ट्विटमा आफ्नो पार्टी छाडेर गएका पूर्वमन्त्री कल्पना धमलासहितका नेतामाथि पनि उनले कटाक्ष गरे। उनले धमलासहितका नेताहरुलाई सत्ताको पार्टीमा पसेर रस चुस्न गएको संज्ञा दिए। बाबुरामले जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो प्रवृत्ति नेपाली नेताहरुमा बढ्दै गएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। ‘यतिबेला जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो प्रवृत्ति निकै मौलाउँदैछ! डनहरू, व्यापारीहरू, क्रान्तिबाट थाकेकाहरू सत्ताधारी पार्टी पसेर रस चुस्न होडवाजी गर्दैछन्’, उनले ट्‍विटरमा भनेका छन्, ‘समाजवादी पार्टीबाट नेकपा पस्‍न लागेका केहीले यता घुर्क्याएर पद लिने र उता अध्यक्षद्वयसँग अलगअलग बार्गेनिङ गरेर राम्रै लाभ लिन लागेछन्! भलो होस् !’
नेपलामा फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै
नेदरल्याण्डसंग नेपालले टस जितेर ब्याटिंग गर्दै, को-को परे अन्तिम-११ मा